०७७ बैशाख ४, कुनै शुभकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहास आजको राशिफल -
०७७ बैशाख ४, कुनै शुभकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहास आजको राशिफल
४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०१:०१ April 16, 2020 Tamakoshi SandeshLeaveaComment on ०७७ बैशाख ४, कुनै शुभकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहास आजको राशिफल
प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। छोटो समयमा पुरुषार्थी काम सम्पादन हुनेछ। नाम, दाम र इनाम कमाउने बेला छ। पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ। समुदायको हितमा लोकप्रिय काम गर्न सकिनेछ। नोकरी र व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने समय छ। प्रयत्न गर्दा दिगो कामको जग बसाउन पनि सफल भइनेछ।
परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। अस्वस्थताले काममा जुट्न नसकिएला। कमजोरीले चिन्ता बढाउनेछ भने परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला। बिग्रिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउने देखिएकाले गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला।
परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुःख पाइनेछ। समयतालिका नमिल्दा आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। खानपानको अवसर प्राप्त भए पनि स्वास्थ्य-चिन्ताले सताउनेछ। परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। कामको मेसो नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दु:ख समेत पाइनेछ। अध्ययनमा पनि त्यति समय दिन नसकिएला।
सोख, खानपान र साजसज्जामा खर्च गर्नुपर्ने समय छ। तापनि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ।
भौतिक साधन जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। मिहिनेत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। प्रतीक्षित नतिजाले पनि उत्साह जगाउनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। तारिफयोग्य कामले राम्रो उपलब्धि दिलाउनेछ। उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ९८४१३५२१६४
लकडाउमा गरिब र असाहयको सेवामा अहोरात्र खटिरहेका एक मनकारी युवा अर्थात दिपेश श्रेष्ठ
कोरोना संक्रमणः न्यूयोर्कको अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि एक नेपालीको कोठामै मृत्यु
अख्तियारले किन गर्छ पक्षपात ?
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०२:२५ February 26, 2020 Tamakoshi Sandesh
०७६ माघ १७, कुनै शुभकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस आजको राशिफल
१७ माघ २०७६, शुक्रबार ०२:१२ January 31, 2020 Tamakoshi Sandesh
क्रिस्चियनले विकासभन्दा विनाश बढाउँदै
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १०:५७ September 20, 2019 Tamakoshi Sandesh
लहरो समात्दा पहरो तान्ने कृषि कर्म
वागमती प्रदेशको बजेट :- वागमतीमा समावेश भएको कृषि सम्बन्धि मुख्य–मुख्य कार्यक्रमहरू
भूत र विकास
कोभिड–१९ लाई एकैचोटी झ्याप्पै रोक्न सकिँदैन, सरकारको प्रयास जारी छ
दतिल फस्याउने जाल
कागजको खोस्टो मात्र नहोस्
अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय
निजी अस्पताललाई कमाउने मौका
दलहरुले राष्ट्रलाई कंगाल बनाउँदै
कोरोना रोगले बढाएको पीडाहरु
Tamakoshi Sandesh	| Developed by ❤MeroHosting.